Amar uu soo saaray Maamulka Gobolka Banadir oo saameyn ku yeeshay dadka soo barakacay & kuwa danta yar – SOMA: Somali Media Association
15 bishaan oo uu dhaqan gal noqday amarkii kasoo baxay Maamulka Gobolka Banaadir ee ahaa in qofkasta oo aan wadan Face Mask-ga la ganaaxi doono lacag dhan Shan dollar, ayaa saameyn ku yeeshay dadka danta yar & kuwa soo barakacay ee kunool Muqdisho & duleedkeeda.
Macalin Aadan Cabdi Xuseen oo ah Horjoogaha Kaamka Buulo Garaay ee ku yaalla duleedka galbeed ee caasimada, ayaa sheegaya in tan iyo uu Amarka maamulka kasoo baxay dhaqan galay ay dad badan aysan aadin shaqooyinka xoogsiga ee ay u bixi jireen, sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan in uu sharciga qabto.
Waxa uu tilmaamay in 120 qoys oo xerada degan ay qoys walba ugu badnaan ay u dhaq dhaqaaqaan laba qof si ay usoo dhiciyaan nolosha reerkooda, laakin iyaga ay awood u yeesheen in 20 kamida qoysaska ay u qeybiyaan Face Mask maro baati ah, balse aysan wax kale hadda awood u lahayn.
“Afxirkii maamulka gobolku amray dadku inay qaataan wey ogolyihiin lakiin awood ay kusoo gataan mahaystaan anagana ma awoodno inaan usoo wada tolno labaatan kamida boqol iyo laabatanka qoys ee kaamka ayaan usoo tolnay “
Waxaa jiraa sidoo kale dad danyar ah oo aad ula dagaalama soo dhicin nolol maalmeedka qoyskooda, kuwaas oo aan awoodin in ay iibsadaan, maadaama ugu yaraan Afxirka la iibiyo 12 oo Shillin Soomaali ah.
Ardo Cabdi Macalin oo ah Hooyada kalinimo ku korisa shan carruur ah oo ay dhashay, ayaa sheegtay in tan iyo markii uu amarka dhaqan gal noqday ay oo wajahday cabsi ah in xabsiga la geeyo, maadama aysan qaadin Face Mask-ga.
Waxa ay tilmaamtay in si dhuumaaleysi ah ku iibiso miis yar oo ay alaabo yar yar u saran yihiin, iyadoo hadba mooda haddii ay askartu soo galaan Suuqa degmada Wadajir u socdaan in sharciga dhaqan galinayaan.
Ardo waxa ay xustay in culeys weyn ay ku tahay haddii loo qabto dhaqan galin la’aanta amarka, maadaama lacagata ganaaxa ay tahay Shan dollar, halka iyadana ay hesho lacag u dhaxeysa Konton illaa Lixdan kun oo Shillin Soomaaliya maalintii.
“Sida aan ognahay maamulka hoose ee xmar waxay amreen in qofkii aan afsaab wadan laganaaxi doono anigu waxaan kamid ahay ganacsatada yar yare e suuqa weyn ee degmada wadajir maalintii celcelis ahaan lacag udhexeysa 50 ilaa iyo 60 kun oo shillin ayaa sioo gasha sidasi daraadeed ma awoodo inaan sijoogtaa uu ibsado afsaabka waxaana maamulka gobolka kacodsanayaa in ay noo iibiyaan afxirka”
Horjoogaha Kaamka Buulo Garaay Macalin Aadan Cabdi Xuseen ayaa sheegaya markale in ay dadka soo barakacay ay sameeyeen Wacyigalin xoog leh, sidoo kalana ay bareen waxa looga baahan yahay qofka si uu uga taxadaro faafitaan cudurka Covid-19.
Waxa uu tilmamay in dadka soo barakacay ee xerada ku nool ay ku jiraan dad waayeello ah, loona baahan yahay in si aad ah looga feejignaado, balse dadkaan aysan awoodin in ay ilaaliyaan tallaabooyinka ay kamid yihiin kala fogaanshaha.
Macalin Aadan waxa uu ugu baaqay Maamulka Gobolka Banadir, in ay u keenaan Face Mask-ga maadaama aysan awoodin in ay iibsadaan, si ay markale ugu baxaan dadkan shaqooyinkooda u badna xoogsiga & dhardhiqida.
“Hada hadii afxirka lawaayo dadku shqa ma aadi karaan cabsi darteed waxayna dhalinkartaa nolol xumo soo wajahda dadka kaamka waxaaana kacodsanayna maamulka gobolku inaay nookenaan waxay noo awoodaan gaar ahaan afxirka oo ah baahida ugu weyn ee hadda dadku dareemayaan” ayuu yiri macalim aadan.
Maamulka Gobolka Banadir Ayaan sheegin haddii ay il gaar ah ku eegi doonaan dadka danta yar & kuwa soo barakacay, & haddii ay jiraan qorsha uga degan dadkaan.
WQ: Cabdixafiid Nuur oo ka tirsan Star FM.